Ungayithuthukisa kanjani ukunakwa
“Qaphela!”, “Qaphela!”, “Uhlale unganakile!”… Akungabazeki ukuthi sesikushilo noma sesikuzwe kaningi empilweni yethu. Siyayazi impela incazelo yegama elithi "ukunaka" kepha siyazi ukuthi ukunaka kuyini ngempela?
Ulapha: Ikhaya » Ochwepheshe » Izihloko » Neuropsychology » Ake sixoxe ngokunakwa
Ngaleli gama ngokwejwayelekile sisho a inqubo yokuqonda evumela ukuthi sinikeze ukuvumelana okuthile kokukhuthaza, ukulahla abanye.
Noma ngabe umbono ungabonakala ucace kangakanani, ososayensi abakaqhamuki nencazelo eyabiwe (nezincazelo ezinamathiselwe) ngalolo daba. Lokho ngokungangabazeki abavumelana ngakho ukuthi akunangqondo ukukhuluma ngohlobo olulodwa lokunakwa kepha kunalokho izinqubo eziningi zokulungiswa kolwazi ezisebenza kumazinga ahlukile. Ngakho-ke uma kunento eyodwa ongaziveza kahle ngayo yile:
kunezinhlobo ezahlukene zokunakwa
Yini? Lapha, lapha umbuzo uba yinkimbinkimbi ngokwengeziwe ...
Izinhlobo ezahlukene ukunakwa
Ngenxa yezizathu ezisobala zesikhala nohlobo lokuphathwa okusithandayo, akunakwenzeka lapha ukuthi ungene ekuzuzweni kwamamodeli ahlukene wethiyori (nazo zonke izinto ezibucayi bawo) kepha sizama ukubheka ngokushesha lokho okungenzeka kuthathwe okuningi ireferensi ku-neuropsychology: kule modeli yethiyori kugcizelelwa izilinganiselo ezimbili, munye umfutho (ukukwazi ukuphendula okushukumisela imvelo isikhathi sesenzo okufanele sithathwe) nokunye selectivity (gxila kwesisusa esifanele ekulimazeni kwalabo abangafanele).
Mayelana neumfutho, lezi zinto zokunakekela zivame ukushiwo:
isexwayiso, okungukuthi, ukulungela ukuphendula okushukumisayo;
ukunakekelwa okuqhubekayo (ukuqwashisa), okungukuthi, amandla okugcina amandla okuphendula kulezi zivuselelo isikhathi eside ngangokunokwenzeka ukwenza umsebenzi.
Mayelana ne selectivity, lezi izakhi zokunakwa ezihlolisisiwe:
wagxila kakhulu, okungukuthi amandla okukhetha kuphela okubalulekile emsebenzini owenziwayo, ukungazinaki okuphazamisayo;
ukunakwa okuhlukanisiwe, noma amandla wokusabalalisa izinsiza zomuntu zokunaka phakathi kwemisebenzi emibili noma eminingi ukuze yenziwe ngasikhathi sinye.
ukushintshanisa ukunakwa, okuthinta ikhono lokwenza imisebenzi eminingi ngokuhambisa izinsiza zokubheka komunye umsebenzi komunye, ngokuhlukile, ukuze ukwazi ukwenza imisebenzi eminingi ngokufana.
Njengoba kungabonakala kulolu hlu olufushane (nolwenziwe lula) akunangqondo ukukhuluma ngokunakwa ngokubanzi, hhayi lapho wenza ukuhlola kokuxilonga okungenani. Ngaphezu kwalokho, yonke into iba yinkimbinkimbi kakhulu ngoba, kusukela ezingxenyeni eziyisisekelo kakhulu zokunaka (uqaphile) kuya kwabaphezulu kakhulu (ukunakwa kokushintshana), iba ngokuya ngokwengeziwe Kunzima ukuhlukanisa la makhono kusuka kumakhono wokuqonda "amasu" abizwa ngokuthi imisebenzi ephezulu (bheka lapha ukuze uthole ingxoxo emfushane). Ngaphandle kokuya ngemininingwane ngalo mkhakha owengeziwe, sifuna ukubheka ukubaluleka kokucabanga ngalezi zinto lapho sizama ukuqonda ubunzima bezingane ezisesimweni somtholampilo.
Ukunakwa nobunzima esikoleni
Lapho ubhekene nakho konke lokhu, kuba yisisekelo ukwazi ukuthi umfundi angaba nobunzima bokugcina isikhathi eside sibheke: ake sicabange ukuthi lokhu kungalinganisa kangakanani nokusebenza kwezifundo. Ngabe usuku olujwayelekile esikoleni luhlala isikhathi esingakanani?
Akubalulekanga kangako ukuphenya ukuthi umuntu ulwela ukuhlala egxile emsebenzini ngaphandle kokuphazanyiswa ukuphazamisa inqubekela phambili: ekilasini, okuwukuphela komthombo wesisusa esinikezwe yibhodi elimnyama nezwi likathisha?
Futhi kuthiwani ngekhono lokuphatha izinsiza zomuntu zokunaka ngendlela “yamasu” (noma eguquguqukayo) esekelwe kwizidingo zesimo?
Yize kubukeka sengathi kucatshangelwa yonke le mininingwane (kanye nabanye abaningi) kwenzeka kaningi ukufunda imibiko yokuxilonga lapho sikhuluma khona ngohlobo olujwayelekile ukunaka ubunzima (yebo, kepha hlobo luni lokunakwa?!), ubunzima ovame ukungaphenywa noma lokhu kwenziwa kafushane kakhulu (kuphela nge-Test edumile yamaBhele kanye nemibuzo ethile yabazali nothisha).
Ukunaka izinhloso zalokho uphethwe (Qonda izimbangela zobunzima futhi uthuthukise amandla), iziphi izinkomba ezingatholwa kubo uma lokhu kungenacacisiwe futhi kunemininingwane eyanele?
Kunenkulumo eningi, futhi kunjalo, mayelana nokufundisa ngokwezifiso futhi okwamanje umbuzo kufanele: ukuxilongwa okungangeni ngokuningiliziwe ngobunzima bengane, yiluphi usizo angalunikeza, ngokwesibonelo, ekubhaleni uhlelo lokufundisa olwenziwe ngezifiso?
Ukubuyekezwa: i-ADHD nomsebenzi wesikole. Amathuluzi namasu wezingane ngokuhlela, inhlangano nobunzima be-fragility
Ake sixoxe ngokunakwa2015-03-252020-10-10http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngUkuqeqeshwa kwengqondohttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2015/03/10951967_10153253698455955_1109113307_n.jpg200px200px
Ingabe ubuhlakani bungandiswa?Imibhalo, ubuhlakani, inkumbulo yokusebenza, i-Neuropsychology
Unganaki: uhlangothi olumnyama lomhlabaImibhalo, iStroke, i-Neuropsychology